MICC : Hentitra ny fanaraha-maso ny famerana ny vidin’entana farany ambony eny an-tsena – Madatopinfo
Nanatanteraka fisafoana teny amin’ny tsena Mahamasina, Anosibe ary Tanjombato ny teo anivon’ny ministeran’ny Fampiroboroboana ny Indostria sy ny Varotra ary ny Fanjifana izay notarihan’i Ministra Edgard Razafindravahy niaraka tamin’ireo mpiaro ny zon’ny mpanjifa sy Lehiben’ny tsena ny talata 12 Aprily. Niompana tamin’ny fanaraha-maso mikasika ny famerana ny vidin’entana farany ambony teny amin’ireo toerana ireo izany fidinana tampoka izany. « Ilaina ny fandraisana andraiki-panjakana tahaka izao mba hisorohana ny fanararaotana hataon’ireo mpamongady sasany matetika ka mahatonga ny fiakaran’ny vidin’entana indrindra ireo entana ilaina amin’ny andavanandro toy ny menaka, ny vary sy ny siramamy », hoy ny mpanjifa sendranay teny amin’ny tsenan’Anosibe, Adeline Randriatsara. Ny ministra mpiahy rahateo efa nilaza fa zava-dehibe ity famerana ny vidin’entana ity ary handray fepetra hentitra raha toa ka misy mpamongady na mpaninjara tsy manaraka ny fandaminana. Araka ny tsikaritra tamin’ireo toerana naleha ireo dia voahaja daholo ny fepetra famerana. Ho fanamafisana ny fitsinjovana ny vahoaka, dia nanambara ny ministra fa mbola mitohy hatrany ny famarotana ny vary mora, sy ny vatsy tsinjo avy amin’ny Fiadidiana ny Repoblika mandrapiakatry ny vary vokarin’ny tantsaha eto an-toerana. Raha ny hita teny amin’ny tsenan’Anosibe manokana, ferana ho 137.000 ariary ny gony amin’ny siramamy namakia raha 2.750 ar ny vidin’ny 1 kilao farany ambony hivarotana azy, ny menaka mandry kosa 158.000 ar ny bidon raha 7.900 ar ny litatra.
Ny Lehiben’ny tsenan’Anosibe, Emile Rakotonirina izay nanamafy fa raha misy fihoara-pefy na endrika fandikan-dalàna mahakasika ireo fepetra napetraka ireo dia hiteraka fanasaziana sy fanakatonana ny tsena mihitsy izany. Miara-miasa amina fikambanana ny tenany amin’ny fanaraha-maso ity famerana ny vidin’entana farany ambony ity. Hatreto, hoy izy, mbola tsy nisy tratran’ny sazy fa manaraka ny toromarika avokoa ny mpivatotra amin’ny ankapobeny. Hitohy ihany koa ny ezaka hotanterahan’ny ministeran’ny Fampiroboroboana ny Indostria sy ny Varotra ary ny Fanjifana momba ity ny famerana ny vidin’entana farany ambony ity, hanatontosa fidinana ifotony any amin’ireo mpanafatra any Toamasina mantsy ny Ministra Edgard Razafindravahy mikasika ny toromarika izay napetraky ny fitondrana amin’ny alalan’ny MICC. Hiroso amin’ny fampiharana ny sazy avy hatrany moa ny ministera amin’io herinandro ho avy io ho an’ireo izay tratra tsy manara-dalàna.